Mamwe Machechi Obatana neHurumende Kuti Vatendi Vabayiwe Nhomba yeCovid-19
Mamwe machechi akavambwa munyika nevatema ari pasi pemubatanidzwa we Zimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches nemusi weSvondo akabatana nehurumende mukukurudzira vatendi kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Chirongwa ichi chakaparurwa pachipatara cheWilkins Infectious Hospital muHarare nemutevedzeri wegurukota rezvehutano Dr John Mangwiro avo vakati vemachechi vanenge vachiunganidza vatendi vanoda kubayiwa nhomba yeCovid-19 bazi rezvehutano rotumira vakoti kunoita basa iri.
Chirongwa chekubaya vatendi ava chiri kuzivikanwa nezita rekuti Operation Marah.
Sachigaro weZIICC, VaAndrew Wutawunashe vanotungamira kereke yeFamily of God vakati vanoda kuti vemachechi vabatsire kuti hurumende ikwanise kusvitsa huwandu hunodiwa munyika kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Mushure mekubaiwa nhomba yavo yekutanga VaDavid Mazurure vane makore makumi mana nemashanu variwo nhengo yeZion Christian Church vakati kubaiwa nhomba kunovabatsira kudzivirira chirwere cheCovid-19.
VaMazurure vatiwo zvakakosha kuti vemachechi vazive kuti pane zvimwe zvinoda zvipatara kozoti zvimwe zvinoda munamato.
Munyori muJohane Masowe eChishanu vachitungamira sangano reNyenyedzi Nomwe Madzibaba Jacob Ndawana vakatiwo kereke yavo inoteerera krudziro yehurumende.
Dr Mangwiro vakakurudzirawo vanachiremba nevakoti vari mumakereke aya kuti vashandewo nebazi ravo mukubatsira kubaya vanhu nhomba yeCovid-19.
Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Bazi rezvehutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nematanhatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 1, 606, 751 vabayiwa nomba yeCovid-19 kechipiri sezvinokurudzirwa.
Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi matatu zvine mazana mana nemakumi masere nechimwe kana kuti 2, 530, 481 vabayiwa nhomba kekutanga.
Zvichakadaro, vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere ichi nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana mana nemumwe kana kuti 4 401.
Vanhu makumi manomwe vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zane rezviuru nemakumi maviri nevana zvine mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 124, 437.
Vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi matatu nemana kana kuti 111 534.